ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီ ENL Group Holdings သည်ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း သို့ နောက်ထပ် IPO လျှောက်လွှာ တင်သွင်း သည် – Pandaily
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီ ENL Group Holdings သည်ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း သို့ နောက်ထပ် IPO လျှောက်လွှာ တင်သွင်း သည်
May 31, 2022, 12:59ညနေ 2022/05/31 14:01:27 Pandaily
တနင်္လာနေ့က ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း (HKEx) ၏ ကြေငြာ ချက်အရENL Group Holdings Limited သည် အများပြည်သူ စာရင်း အတွက် လျှောက်လွှာ ကို ၎င်း ၏အဓိက ဘုတ်အဖွဲ့ သို့တင်ပြ ခဲ့သည်AdventCF သည်တစ် ဦး တည်းသော စပွန်ဆာ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကုမၸဏီသည္ ယခင္က ၂၀၂၁ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္တြင္ ေဟာင္ေကာင္ စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္း သို႔ ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္း ခဲ့သည္။
ENL Group Holdings သည်ဟောင်ကောင် အခြေစိုက် ကုန်စည် ပို့ဆောင် ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေး သူဖြစ်ပြီး တရုတ်ပြည်မကြီး တွင် ရုံးခွဲ များရှိသည်။ ၎င်းသည် ဖောက်သည်များအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေ ကြောင်းနှင့် ပင်လယ် ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ ကိုပေးသည်။ သိုလှောင် ခြင်း၊ ထောက်ပံ့ ပို့ဆောင် ရေး၊ ထုပ်ပိုး ခြင်းနှင့် တံဆိပ်ကပ် ခြင်းနှင့် palletizing ၀ န်ဆောင် မှုများအပါအ ၀ င် ၀ ယ်ယူ သူများအား ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး နှင့်ဆက်စပ်သော ထပ်တိုး ၀ န်ဆောင်မှု များကိုလည်း ပေးသည်။
၎င်း ၏စီးပွားရေး ပုံစံ တွင် အဓိကအားဖြင့် လေကြောင်းလိုင်း များနှင့် ရေကြောင်း ကုမ္ပဏီ များမှ ကုန်တင် နေရာများ ရယူ ခြင်း၊ ကုန် ပစ္စည်းများကို လိုအပ်သော နေရာများ သို့ပို့ဆောင် ခြင်း၊။
ပေါင်းစည်း မှုတစ်ခု အနေနှင့် ကုမ္ပဏီသည် လေကြောင်းလိုင်း များနှင့် ရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီများ မှရရှိသော ကုန်တင် နေရာ များကို အပြိုင်အဆိုင် စျေး နှုန်းဖြင့် သက်တူရွယ်တူ ကုန်ပစ္စည်း တင်ပို့ သူ များထံ ပြန်လည် ရောင်းချ သည်။ ကုန်ပစ္စည်း သိုလှောင် ခြင်း၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး နှင့်အခြား အထောက်အကူပြု ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင် မှုများအပါအ ၀ င် ၀ ယ်ယူ သူများအား ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး နှင့်ဆက်စပ်သော ထပ်တိုး ၀ န်ဆောင်မှု များကိုလည်း ပေးသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ် အရောင်း စက် ကုမ္ပဏီ UBOX သည်ဟောင်ကောင် IPO အတွက် လျှောက် ထားသည်
စံချိန်တင် ကာလအတွင်း ကုမ္ပဏီသည် ကုန်ပစ္စည်း ပေးသွင်း သူ ၁၄၀၀ ကျော် နှင့်စီးပွားရေး ဆက်ဆံ မှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အလားတူ ကာလအတွင်း ထိပ်တန်း ကုန်ပစ္စည်း ပေးသွင်း သူ ငါး ဦး ၏စုစုပေါင်း ၀ ယ်ယူ မှုသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၆၁. ၇% ၊ ၆၂. ၄% နှင့်စုစုပေါင်း ကုန် တင်ကုန် ချ ကုန်ကျစရိတ် ၏ ၄၉. ၄% ရှိသည်။ အကြီးဆုံး ကုန်ပစ္စည်း ပေးသွင်း သူများထံမှ ၀ ယ်ယူ ခြင်း သည်စုစုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ် ၏ ၄၇. ၃% ၊ ၅၂. ၈% နှင့် ၃၇. ၀% အသီးသီးရှိသည်။
ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ် 2019, 2020 နှင့် 2021 ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ် များအတွက် စုစုပေါင်း ဝင်ငွေ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ 646 သန်း, ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ 486 သန်းနှင့် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ 579 သန်း အသီးသီး, ထို ကာလအတွင်း အသားတင် အမြတ် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ 25.565 သန်း, ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ 33.58 သန်းနှင့် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ 27.291 သန်း အသီးသီး ဖြစ်ခဲ့သည်။